Forum serasera malagasy Teny malagasy - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Teny malagasy
Rabefou - 22/09/2013 22:03
Tena mampalahelo ny zava-mitranga manodidina ny fanoratan'ny mpanao gazety ny teny malagasy. Kanefa ny gazety sisa no tena mba bokin'ny maro eto amintsika,
Nehemiah - 23/09/2013 08:15
Minoa ahy fa ny hakamoana ara-tsain'ny gasy no anton-dehibe
zakaiosy - 25/09/2013 11:10
Tokony hisy SIVANA goavana mikasika an'io fanajana ny teny malagasy io, ka ny gazety sy ny fahitalavitra ihany koa izay manao fahadisoana maro loatra @ fanoratana sy fitenenana ny teny malagasy dia saziana mafy dia mafy, satria mitovy @ famotehana ny harem-pirenena ny fanimbana ny teny malagasy, satria io no harem-pirenena voalohany mialoha ny andramena sy ny volamena sns...Inona moa no tena asan'ity hoe Akademia malagasy ity fa tsy haiko loatra, izaho mieritreritra fa izy no tokony hiady mafy ho amin'io hevitro io raha tiany ny hevitro. Fa miaraka @io dia tokony haverina ny fampianarana @ teny malagasy any an-tsekoly ary ireo sekoly tsy miankina dia tsy tokony hahazo hisokatra raha hampiroborobo ny teny frantsay no tena kendreny. Mbola averiko ihany fa raha ny fahaizana ny teny frantsay no mampandroso dia ny firenena afrikana marobe no efa tokony handroso mitovy @ frantsay satria mbola T2 ny ankizy REHETRA any dia efa miteny frantsay , kanefa tena mbola resin'ny gasy lavitra raha jerena @ ankapobeny ny fandrosoana sy ny toe-tsain'ny olona, ohatra CONGO, MALI sns. Vao omaly aho no naheno tao @ TVM fandaharana hoe "FEMME EXCEPTIONNELLE", ny Docteur Emma Roselyne no tao, ilay saika hilatsaka ho filoham-pirenena fa voasakana, dia nilazalaza ny momba azy tao izy : Tsy nianatra tany @ sekoly "Expression française", fa teny @ sekoly gasy (EPP, CEG, Lycée Ampefiloha) kanefa dia tena lasa lavitra tokoa t@ fianarana ary nahazo ny mari-pahaizana ambony maro izay tsy ananan'ny nianatra t@ Expression Française. Mba diniho ihany e !
vahiny2004 - 25/09/2013 11:36
Amiko kosa aloha tsy misy idiran'ny hoe école d'expression française na tsia ny tsy fahaizana teny malagasy e, zavatra 2 samihafa izany. Azo atao tsara ny mifehy ny teny malagasy sy mifehy ny teny frantsay .
Nehemiah - 25/09/2013 15:03
Tsy vahaolana ny fanevatevan'ny kolon-tsaina hafa
zakaiosy - 28/09/2013 12:53
Tena voalazanao mihitsy fa tsy vahaolana ny fanevatevana ny kolontsaina hafa, saingy ny filazana fa tsy hampandroso ny gasy sy Madagasikara ny kolontsaina vahiny dia tsy fanevatevana ny kolontsaina hafa akory. Ny filazan'ilay namana teo aloha hoe misy gasy tsy manaja ny teny malagasy aza no heveriko ho "fanevatevan'ireo tsy manaja ny teny gasy ny kolontsaina malagasy". Kanefa mety tsy ho fanahy iniana kosa aloha fa fahadisoana ihany, saingy anjarantsika rehetra no miezaka. Hoy ny gasy hoe : "Aza mitomany randrana manendrika ny hafa"
zakaiosy - 28/09/2013 13:33
Tena voalazanao mihitsy fa azo atao tsara ny mifehy ny teny malagasy sy ny teny frantsay miaraka, tsy ilana fandehanana any @ sekoly expression française izany, disoiko tanteraka ianao, tena misy ifandraisany be mihitsy ny tsy fahaizana teny malagasy sy ny sekoly "expression française", satria ireny sekoly ireny dia tsy matotra mihitsy (mba tsy hilazako hoe tsy misy) ny fampianarana ny teny malagasy, vokany : Miteny gasy ny ankizy satria malagasy no ifaneraserany eo @ fiarahamonina saingy tsy mahafehy tsara araka ny taonany sy ny kilasiny ny teny malagasy, nefa koa tsy mahafehy tsara ny teny frantsay araka ny taonany sy ny kilasiny, ny voka-dratsin'ireo dia any @ faharanita-tsain'ny zaza, eo @ fahaizana mandalina sy mamakafaka hevitra ary INDRINDRA ny fahaizana mamoaka hevitra sy miaro ny hevitra tiana hotohanana. Moa ve mahafehy tsara ny teny frantsay ny mpampianatra any @ sekoly "expression française" ? TSIA no valiny, ankoatr'ireo sekoly goavana toy ny Lycée Français. Azo atao tsara ny mifehy ny teny malagasy sy ny teny frantsay miaraka ANY @ sekoly mampiasa ny teny malagasy ho teny enti-mampianatra, fa ny fomba fampianarana sy ny fahaizan'ny mpampianatra no tena mitondra an'io. Io fomba fampianarana sy ny rafitry ny fampianarana io no tena olana fa tsy ny fanovana ny teny enti-mampianatra ho teny frantsay. Iza moa ireo mpampianatra eto Madagasikara @izao fotoana : Ireo izay tsy mahita asa, ireo very asa, ireo fianakavian'ny talen'ny sekoly, ireo tsy mahita atao, dia aleo mba "MAMPIANAPIANATRA ENY E ", mba mandray 125000 Ariary, tsy aleo ve mba mandray kely toy izay tsy mandray mihitsy, tena marina izany satria sarotra ny fiainana. Dia mba henoy ny teny frantsay eny @ireny sekoly ireny, ny teny matetika henonao ao dia ny hoe : "ça suffit hein !", mahalana ianao no maheno ny mpampianatra manao fehezanteny lava. Tsy mahagaga raha sahirana avokoa ny mpianatra rehefa haka CEPE eo @ taranja PROBLEME, satria tsy tafiditra tsara ao an-dohany ny tena hevitry ny olana hovahana, io ilay lazaiko hoe any @ faharanita-tsaina no voa. Nahoana moa ireo olona ao @ "Corps de la paix" sy ireo vazaha amerikana ao @ Eglizy iray (ireny manao akanjo fotsy ambony, manao fehitenda mitety tanàna ireny) no malaky be ny fahaizany miteny gasy ? Satria ilay fomba nampianarana azy no tena matotra. Tena misy tokoa ny sekoly tany aloha (1972-1986 teo ho eo) no mampiasa ny teny gasy ho teny enti-mampianatra kanefa mahafehy tsara ny teny frantsay koa ny mpianatra tao aminy, ny sekoly katolika no tena maro @'izany, izany no midika fa ny fahaizan'ny mpampianatra sy ny traikefa ananan'ny sekoly no mitondra an'io. Izao koa no aza adinoina : Ny fahaizana tenim-pirenena iray dia manampy anao betsaka hahafehy koa tenim-pirenena hafa, tsy misy hafa @ mozika, raha efa mahay gitara ianao dia mora mahay piano raha oharina @ olona mbola tsy mahay gitara. Koa fehezo tsara ary ny teny malagasy fa hahay teny frantsay ianao. Omena ohatra ianao @ireo olo-malaza mahafehy tsara ny teny gasy ka mahafehy ny teny frantsay koa : J.J. Rabearivelo, Andriamanjato Richard, Tsilavina Ralaindimby ...Raha diso aho dia aza ny tenako no ariana fa ny teniko"
Nehemiah - 28/09/2013 14:41
Aoka isika hanao tahaky ny zaponey : izay tsara raisintsika, izay tsy mety amintsika avelantsika
vonynive - 30/09/2013 15:13
tsy dia ny teny enti-mampianatra no koa mety ho olana fa ny toetsain'ny mpianatra sy ny mpampianatra no tsy saropiaro @ maha izy azy
vahiny2004 - 30/09/2013 15:23
Tsy dia mahaliana ilay valitenao satria toa mifono fankahalàna sekoly mampiasa teny frantsay ary manindrahindra ny sekoly katolika loatra.
Mandresy lahatra ahy kokoa ny vali-tenin'i Nehemiah sy Vonive : ny faniriana te hifehy aloha no voalohany ary anjaranao ny mijery hoe sekoly iza na iza no hahafahanao manatratra ny tanjona tianao tratrarina
zakaiosy - 03/10/2013 09:08
Tsy marina ny filazanao fa hoe mankahala ny sekoly mampiasa ny teny frantsay aho ary manindrahindra ny sekoly katolika : Voalohany aloha dia sekoly katolika tany @ taona 1972-1986 tany ho any no resahako fa tsy ny @zao fotoana, faharoa dia izaho koa mba resy lahatra t@'ireny sekoly mampiasa ny teny frantsay ho enti-mampianatra ireny, ary mianatra any ny zanako, talohan'ny nampidirako ny zanako tany dia nanontany tsara ny talen'ny sekoly aho mikasika ny fisian'ny taranja malagasy ao @ sekoly, dia nanome toky izy fa tena misy ary tsy misy atahorana mihitsy fa hahafehy tsara ny malagasy ny ankizy avy ao, kanefa dia tsy izay no nitranga, nihevitra ihany aho sao ny zanako no tsy dia mahavoa ka namakafaka tsara ireo ankizy marobe ao @ sekoly, dia tena mitovy daholo, dia nihevitra indray aho sao ilay sekoly io ihany no tsy mahavoa ka namakafaka sekoly maro teto Antananarivo, dia tena mitovy daholo e. Nanatona manam-pahaizana eo @ fampianarana aho, olona efa ela teo @ fampianarana izy io sady mpanoratra, izany hoe mahafehy tsara ny teny malagasy SY ny teny frantsay. Dia nanome fanazavana tamiko izy, fanazavana @ antsipiriany mihitsy mikasika ny fampianarana tenim-pirenena izay sarotra amiko ny famerenana azy eto na dia nazava tamiko aza, fa fehiny dia io hevitro eo ambony io no heviny, izany hoe heviny io notohanako io. Mety hanontany angamba ianao hoe koa naninona tsy nafindra haingana any @ sekoly katolika ny zaza, saika hafindra tokoa saingy izao, asa raha fantatrao fa manahirana be ny fidirana any @ sekoly katolika izao rehefa eo anelanelan-taona ny zaza (5è, 4è, 10è, 9è), ary izao koa lasa misy risoriso be ny fampidirana zaza any @ sekoly katolika izao, ary tratrako mihitsy io fa tsy honohono akory, sady mba hilazako aminao fa tsy mpanindrahindra sekoly katolika mihitsy aho. Katolika ny tenako ary nianatra t@ sekoly katolika T1-T9, fa izaho no anisan'ny vitsivitsy amin'ireo Katolika miezaka manitsy izay tsy mety @ sekoly katolika sy ny fiangonana katolika satria misy zavatra tokony hovaina BETSAKA ao. Sady tsy manindrahindra aho no tsy mankahala fa ilaina ny filazana izay heveriko fa marina.
mpisotrtoaka - 11/03/2014 08:14
Vahiny2004 & Zakaiosy !
Tena mitombona be ny tenin'i Zakaiosy amle resaka expression française satria ankehitriny rehefa manana diplaoma ambony am langue française no mirotsaka hanatevin-daharana ny akademisiana dia voaray soamantsara satria hono hoe hanabe voho ny tanindrazana malagasy ! Izany hoe Liana amin'ilay firenena izy dia hampidirina ! VOLA no hitako miady ao fa ankoatr'izay d ilay hira hoe MISY MIHAINO !!!
Nav - 13/07/2014 19:57
Raharaha lehibe, mampametra-panontaniana tokoa ity lohateny momba ny teny malagasy ity tahaka ireo dinika hita eto amin’ny Fanabeazana, ohatra ireto fanontaniana ireto: teny malagasy ampiasain’ny mpanao gazety, teny malagasy sy teny frantsay any amin’ireo sekoly (malagasy) miteny frantsay, andraikitry ny Akademia Malagasy, teny enti-mampianatra, . . .
Manana olana ny teny malagasy araky ny fijeriko, olana tena lehibe sy lalina, sokajiako ho olana politika sy olana teknika ara-drafitra ka arosoko eto mba hiadiana hevitra.
1	Olana politika
Ny hamaritako an’io dia ny sata sy fahefana omen’ny fitondram-panjakana ny teny malagasy, ny fitondram-panjakana rehetra nandritr’izao fahaleovantena izao, nanomboka tamin’ny 1960 ka mandrak’ankehitriny: izany hoe inona no fiheveran’ny fitondram-panjakana ny teny malagasy, inona no lanja omeny, inona no sata sy fahefana omeny an’io teny malagasy io?
Ny Lalampanorenena nifanesy dia mitovy daholo (aseho mivantana na ankolaka): ny LP farany, ny LP 2010 dia manambara ao amin’ny and. 4 fa : Ny teny malagasy sy frantsay no teny ofisialy.
Inona no dikan’io? Fihatsarambelatsihy sy fitaka: omena fahefana ho teny ofisialy ny teny malagasy nefa tsy matoky ity teny malagasy ity izy ireo, teny malagasy lazainy hoe malemy, tsy fa afaka hasolo ny teny frantsay ary dia nosovohina ampiana ho teny ofisialy koa ny teny frantsay mba hampiasana ity farany ity amin’ny seha-panjakana maro.
Manampy trotraka an’io didy jadona ataon’ny mpitondra fanjakana io koa ireo manampahaizana malagasy maro, nianatra sy niaina tao anaty tontolo frantsay, tsy tafiditra ary tsy niezaka ny hiditra ao anatin’ny tontolo malagasy ary dia manararaotra ny fahaizany teny frantsay koa hanampy ny jadona any amin’ny fampianarana Ambaratonga faharoa sy Ambaratonga Ambony, ary hatrany amin’ny Ambaratonga fototra aza dia mbola anaovany amboletra hanerena ny ankizy madinika malagasy hiteny frantsay.
Inona ny vahaolana? Esorina io teny frantsay teny ofisialy ao amin’ny LP io.
Ahoana no ahatongavana amin’izany? Porofoina amin’ireo mpitondra fanjakana sy manampahaizana malagasy fa rehefa asiana fanamboarana-fanatsaràna ny teny malagasy dia afaka ahasolo ny teny frantsay.
Fanamboarana inona? Ny tohin’ny dinika manaraka eto ambany no hanome izany fanamboarana izany eo amin’ny sehatra anankiroa: i) eo amin’ny fandraiketana an-tsoratra ny teny malagasy, eo amin’ny fanamboarana abidia izany ary ii) eo amin’ny teny am-bava, eo amin’ny fanisana am-bava amin’ny teny malagasy
2	Fandrafetana abidia ho an’ny teny malagasy
Mivilana ny abidia malagasy ankehitriny : ny litera “o” vakiana hoe [o], tsy izany anefa no fitsipika amin’ny anakamaroan’ny tenim-pirenena maro, eo amin’ny Abidia Fonetika Iraisam-pirenena API, oh: fr coco, it Roma.
Mandringa ny abidia : tsy ampy ny litera hanondroana ny feo izay nisy tany aloha “ou” tamin’ny Abidia malagasy voalohany 1823 kanefa nesorina taty aoriana.
Mandringa ny abidia : tsy ampy ireo litera ampiasaina amin’ny fiainana moderna isan’andro, ohatra: ahoana ny hampianarana ny taranja fizika, shimia sy matematika rehefa tsy misy ireto litera ireto: c, q, w, u, x, y hita ao amin’ireto voanteny ireto: watt, celsius, quorum, yaourt, xenon?
Inona ny vahaolana? Ahitsy ny litera “o” tena tononina amin’ny feo [o], oh: zovy, O ry Fara ah, moto (ilay manana kodiarana 2).
Averina ny litera “u” 1823 hotononina tena feo , oh: mouramoura, moufou/mufu (Tandremo raràna ny miteny frantsay).
Nisy velakevitra naseho tao amin’ny Akademia Malagasy nandritra ny Fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena UNESCO momba ny tenindreny 21 Febroary tamin’ny 2013, efa voarakitra ao anatiin’ny boky revion’ny Akademia izany ankehitriny, mitondra ny lohateny hoe:
Fandrafetana abidia ho an’ny teny malagasy, in Bull. Acad. Malg, Tome XCIII/1, Janvier-Juin 2013, Akademia Malagasy, Antananarivo.
Azonareo jerena ao amin’ny Trano famakiam-bokin’ny Akademia, Tsimbazaza io lahatsoratra io ary heveriko fa aorian’io famakianareo ny lahatsoratra io vao tsara ny miady hevitra.
Azonareo jerena koa ireo dinika eto amin’ny forum.serasera.org (ity forum ity) ao amin’ny lohateny Kolotsaina: Teny malagasy any ivelan’i Madagasikara sy Mampalahelo fa simba sy very hasina ny teny malagasy.
3	Fanitsiana-fanarenana ny fanisana malagasy ankehitriny
Porofo 2 no omena anareo ilazana fa tsy mahomby ny fanisana malagasy ankehitriny.
Rehefa mandefa telefonna ianareo,ampiditra ilay N° ao amin’ny telefonna dia azo antoka (100%) fa miteny frantsay. Fa tsy mandeha angaha ny teny malagasy? Ahoana àry: 033 12 705 48 amin’ny teny malagasy hoe? Valo amby efapolo Dimy sy fitonjato Roa ambin’ny folo Telo amby telopolo Zero? Angaha efa nanandrana ianao? Sa efa azonao antoka fa tsy mandray an’io ny telefoninao? Ary maninona no miteny frantsay? Fa angaha misy paika amin’ny teny malagasy? Misy tokoa, omena anao izao manaraka izao (ny fanazavana teorika sy ara-pitsipika ary ara-tantara hohitanao ao amin'ilay lahatsoratra omena ery aoriana).
Tel : 033 12 705 48
Atombohy avy aty Ankavia ny famakiana ny N°
Vakio/Ampidiro tsirairay ny tarehimarika izany hoe raha vao miteny tarehimarika iray ianao dia tsindrio ny toshy mifandraika aminy.
Amin'ny teny malagasy tanteraka ny anaran'ny tarehimarika, ireto omeko ireto: 1: Iray, 2: Roa, 3: Telo, 4: Efatra, 5: Dimy, 6: Enina, 7: Fito, 8: Valo, 9: Sivy, 0: Zero
033 12 705 48 : Zero Telo Telo Iray Roa Fito Zero Dimy Efatra Valo
Tsindrio Alefa/OK (toshy maitso)
Tselatra io, mahomby, mahasolo ny paika amin'ny teny frantsay.
Ny porofo faharoa: raràna ianao (teratany malagasy) tsy hanoratra ny sorabola amin’ny sheky banky amin’ny teny malagasy fa didiana hanoratra amin’ny teny frantsay.
Tandremo: ny fanisana malagasy no manana olana toy ilay N° tel etsy ambony fa tsy misy resaka politika mihitsy eto. Tsy ny maha banky frantsay azy akory no handidiany hanoratana ny sorabola feno amin’ny teny frantsay ka mety heverinao fa mbola mitohy indray ny fanjanahantany sy fanapepoana ny malagasy, TSIA, ny firafitry ny isa amin’ny teny malagasy no mifanipaka ny an’ny teny malagasy: ny rafitry ny soratra/tarehimarika, oh: 6325 Ar dia lazaina hoe manaraka ny rafitra Havia-Havanana, ny rafitry ny soratra/fehezanteny feno anefa rafitra Havanana-Havia: Dimy amby roapolo sy telonjato sy enina arivo Ariary. Tsy eken’ny banky izany fa mety hiteraka fahadisoana ho an’ny mpanao kanty sy mpitahiry vola, ny an’ny teny frantsay anefa mitovy ny rafitra, sorabola/tarehimarika: 6325 Ar, rafitra Havia-Havanana ary ny soratra feno: Six mille deux cent trente cinq Ariary, rafitra Havia-Havanana koa.
Ny rafitra Havia-Havanana no voaporofon’ny matematika ary arahin’ny fomba fanisana maro eran-tany.
Vahaolana ho an’ny fanisana malagasy: ahitsy atao rafitra mitovy Havia-Havanana na ny soratra/tarehimarika (efa vita) na ny soratra feno: 6325 Ar : Enina arivo sy telonjato roapolo dimy Ariary.
Nisy koa tahirin-kevitra naseho tao amin’ny Akademia Malagasy ary voarakitra anatin’ny tahiry mitondra ny lohateny hoe:
Ny fomba fanisana malagasy vaovao, Mémoires de l’Académie Malgache, Fasc. LIV, 2007, Akademia Malagasy, Antananarivo.
Azonareo jerena ao amin’ny Trano famakiam-bokin’ny Akademia, Tsimbazaza io tahirin-kevitra io ary heveriko fa aorian’io famakianareo ny lahatsoratra io vao tsara ny miady hevitra.
Toy izany àry ny fanamboarana-fanatsaràna ny teny malagasy, atolotra handresena lahatra ireo mpitondra fanjakana sy ireo manampahaizana malagasy: ahazo teny malagasy nahitsy sy narenina isika, matanjaka ary tena mahomby.
Nav - 13/07/2014 20:20
Teny malagasy_forum.serasera.org (fanitsian-diso)
Aza fady misy diso endrika etsy amin'ny lahatsoratra etsy ambony ka ahitsio toy izao:
1) Fandrafetana abidia
Mivilana ny litera "o" vakiana amin'ny feo [u} ; fa tsy hoe feo [o]
2) Tsy misy fanoritana akory ny ankamaroan'ny andian-tsoratra manomboka ery antenantenany hatrany amin'ny farany fa ahitsio toy izany indrindra.